माधव नेपाल पक्षद्वारा नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा, पार्टीको नाम अझै जुरेन के राख्दा राम्रो होला?
माधव नेपाल पक्षद्वारा नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा, पार्टीको नाम अझै जुरेन के राख्दा राम्रो होला?काठमाडौं:नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र विवाद समाधान को साटो आ-आफ्नो बाटो लाग्ने तरखर नेताहरूले थालेका छन्। एमाले माधव पक्षका सांसद एवं नेता मेटमणि चौधरीले केही दिनभित्रै नयाँ पार्टी बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
चौधरीले नयाँ बन्ने पार्टीमा कम्युनिस्ट र एकीकृत शब्द पर्ने पनि बताए ।आज एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता चौधरीले भने, “पार्टी गठनको छलफल जारी छ ।तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै राख्छौं शब्द यताउता हुन सक्छ, कम्युनिस्ट र एकीकृत दुइटा शब्द छुट्दैन । चौधरीले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बस भनेलगत्तै एमाले ।
अध्यक्ष केपी ओलीले व्यावहारिक रुपमा पार्टी विभाजन गरिसकेको आरोप लगाए । उनले थपे, “ओलीसँग थुप्रै असहमति भए ।पनि हामीले एक ठाउँमा रहनका लागि पहल, प्रयत्न र प्रयास नगरेका होइनौं ।तर ओलीले विभाजनको कमिटमेन्ट गरिसके का रहेछन् । त्यसैले २०७५ जेठ २ मा फर्कों भन्दा पनि मानेनन् अब एमालेलाई सग्लो राख्न सम्भव भएन । एकताको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
Previous के तपाईकाे पैताला भतभती पोल्छ, सावधान ! यी रोगका लक्षण हुन सक्छ
Next यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई यो सिप अरुमापनि सेयर गर्नुहोला !